Njem azụmahịa ga-achọ nkwado n’etiti ọdịda 63% nke njem
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Njem azụmahịa ga-achọ nkwado n’etiti ọdịda 63% nke njem
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Iji lafere ọrịa ahụ na-efe efe, ụfọdụ ụlọ ọrụ ga-achọ ịtụle njikọ na nnweta (M&A) iji kwado asọmpi, na-enweta ego, na ịzụlite arụmọrụ arụmọrụ.
Industrylọ ọrụ njem azụmahịa zuru ụwa ọnụ efuola ọtụtụ ijeri ego ndị ahịa na-enweta
Ọrịa na-efe efe mere ka e nwee ahịa karịrị akarị n'etiti ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem azụmahịa
Fọdụ ndị isi egwuregwu nwere ike ịmalite ijikọ ọnụ iji belata oke ọkụ ma bulie ahịa na nnweta
Ọrịa na-efe efe nke COVID-19 nwere mmetụta dị egwu na njem njem azụmahịa. Ngalaba mba ụwa kachasị bụrụ nke kachasị emetụta, na-eche ihu ọdịda 75% na njem niile.
Njem njem azụmahịa nke ụlọ na-ata ahụhụ, na-agbada site na 56% (63% belata mkpokọta na 2020). N’ihi nke a, ụlọ ọrụ na-ahụ maka azụmahịa na mba ụwa efuola ọtụtụ ijeri ego ndị ahịa na-enweta, na-ekepụta ahịa karịrị akarị n’etiti ndị ọrụ njem njem azụmahịa.
Mbelata nke ọchịchọ ndị njem emeela ka ahịa jupụta ebe ndị ọrụ njem azụmahịa na-alụ ọgụ maka nlanarị. Companieslọ ọrụ ndị a nwere ụfọdụ mkpebi siri ike banyere ọdịnihu ha, na iwusi ike nwere ike bụrụ nhọrọ kachasị adigide maka nlanarị. Industrylọ ọrụ ahụ nwere ike ịhụ ụfọdụ ụlọ ọrụ obere na ọkara dị obere (SMEs) jikọrọ ọnụ iji nye onwe ha ikike ịzụrụ ihe na ụlọ ọrụ ahụ.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị isi egwuregwu nwere ike ịmalite ijikọ ọnụ iji belata oke ọkụ ma bulie ahịa na nnweta.
Nkwado na-abụkarị nke na-eme ka azụmahịa wee bụrụ onye ndu n'ime ụlọ ọrụ. Mgbe ụlọ ọrụ zụtara ma ọ bụ jikọtara ya na ụlọ ọrụ ọzọ, ọ na-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị asọmpi ma na-ebuwanye ndị ahịa ya. Agbanyeghị, na ihu igwe dị ugbu a, nbata, arụmọrụ, na mbelata ego bụ isi ihe na-akpali M&A. Mmụba nke ego a na - enweta ga - eme ka ụlọ ọrụ ndị njem na - azụ ahịa jikọtara ọnụ na ụlọ ọrụ ahụ, na - enye ha ohere ịchịkwa ọnụego, were ahịa niche ma mepụtawanye ego ha na ndị na - ebubata ya.
Dịka otu ụlọ ọrụ sirila, otu a ka ọ dịkwa ndị njem njem. Ndị ahịa na-ahụ maka ọrụ, otu nde ruru nde ego ha nwetara, kwesịrị obere akụkụ nke uru ugbu a. Ọtụtụ ndị na-akọwa ụlọ ọrụ na-ekwu na nke a bụ naanị mgbanwe oge. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị ahịa azụmaahịa emegharịala na oria a site n'ịdị na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agbanwe agbanwe, na-emepe ụzọ ọhụrụ iji kparịta ụka, nwere ike ibute mbelata ọchịchọ ndị njem maka ogologo oge.
Teknụzụ nkwukọrịta dịka Mbugharị, Ngalaba Microsoft na Citrix enyerela ụlọ ọrụ aka ịnọgide na-etinye aka na ndị ọrụ, mmekorita, na mmekọrịta n'oge niile ọrịa na-efe efe, na-akpata ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ajụ ajụjụ maka mmefu ego nke ụlọ ọrụ ha. Dika nghoputa nke ulo oru na nso nso a, 43% nke ndi nzaghachi kwuru na mmefu mmefu nke ulo oru ha ‘gha belata nke ukwuu’ n’ime onwa iri na abuo n’abia, na-egosi na ulo oru di iche-iche ga-aga n’ihu na teknụzụ nkwukọrịta ma jiri nlezianya tụlee mkpa ọ dị iji isi obodo dị oke ọnụ maka ụgbọ elu na njem ndị ọzọ. mmefu.